40+ amin'ireo teny tsara indrindra momba ny demony Slayer ho an'ireo mpankafy ny Anime! - Hafa
40+ Demon Slayer Quot mba hanampiana anao hitadidy ny Anime!
Teny nalaina anime Demon Slayer nalaina avy amin'ireto litera manaraka ireto:
Demon Slayer dia andiany anime miresaka daholo ny rehetra mandritra ity fahavaratra 2019 ity! Izy io dia andiana hetsika izay azo ampitahaina amin'ny Owari No Seraph amin'ny lohahevitra, sy ny karazany hafa Shounen anime.
Raha mila toerana hanaovana tsoratadidy ireo teny nindramina Demon Slayer tsara indrindra ianao, na tianao ny tsara indrindra atolotry ny andiany ho an'ny sasany ilaina fialamboly… Orinasa Mecha no toerana tokony hisy.
Andao hanombohana amin'ireto tenin'ny Demon Slayer ireto!
1. Sabito Quotes
“Hataoko tsy manadino ireo teknika miafina nampianarin'i Urokodaki anao.” - Sabito
“Ny zavatra nataonao rehetra dia ny fanaovana tsianjery ny zava-misy. Tsy fantatry ny vatanao izay tokony hatao. ” - Sabito
“Mandehana lavitra! Raha lehilahy ianao. Raha miantso ny tenanao ho lehilahy ianao! Tsy misy làlana hafa aleha fa mandroso! ' - Sabito
2. Giyu Tomioka Quotes
'Mahatsapa ny hatezerana, ny hatezerana mahery vaika sy madio tsy afaka mamela heloka dia ho lasa mpamindra fo tsy misy tohiny handraisana andraikitra.' - Giyu Tomioka
“Tsy manana zo na safidy ny malemy. Ny hany anjaran'izy ireo dia ny hotorotoroin'ny mahery tsy an-kijanona! ” - Giyu Tomioka
3. Tanjiro Kamado Quotes
“Mianiana aho fa hamonjy anao ny zokinao lahy na ahoana na ahoana!” - Tanjiro Kamado
“Ny famonoana olona dia… tsy azo avela.” - Tanjiro Kamado
'Ny fatorana misy eo amiko sy i Nezuko, tsy azon'ny olona nosarahana!' - Tanjiro Kamado
'Na iza na iza mandratra ny rahavaviko… Hashira na tsia, tsy havelako ianao hiala amin'izany.' - Tanjiro Kamado
“Na firy na firy ny olona, ​​mety ho resy ianao, tsy manan-tsafidy afa-tsy ny miaina amin'ny fiainana ianao. Na dia mandratra izaitsizy aza, ny kapoka angamba. ” - Tanjiro Kamado
“Ireo izay nanenina tamin'ny zavatra nataony. Tsy hanitsakitsaka azy ireo mihitsy aho. Satria olombelona koa ny demonia taloha. Tahaka ahy ihany, olombelona ihany koa izy ireo. ” - Tanjiro Kamado
'Aza malahelo! Vonjeo izy! Vonjeo izy! Vonjeo izy! Tsy manana hery intsony aho! Mandrosoa !! ' - Tanjiro Kamado
“Vitako io fantatro fa vitako izany. Izaho no bandy nahavita taolana tapaka na tsia… Na inona na inona… vitako io! Afaka miady aho! ” - Tanjiro Kamado
“Tsotra ny loha amin'ny ady. Izay mahery sy haingana no mandresy. ' - Tanjiro Kamado
“Aza ny fanahinao ihany no ampiasainao. Eritrereto, eritrereto. ” - Tanjiro Kamado
“Mifoka rivotra hatrany amin'ny rantsantanako! Mampitombo ny fifantohana ny fisaintsainana. ” - Tanjiro Kamado
“Mijere mahitsy. Mifohaza! Omeo izay rehetra azonao Tanjiro! Omeo izay rehetra anananao! ' - Tanjiro Kamado
“Miasà amin'izany. Ny hany azoko atao dia ny miasa mafy! Izany no tantaram-piainako! ' - Tanjiro Kamado
“Tsia! Satria raha vao mahafehy izany ny tenako, dia afaka mampianatra azy ireo koa aho! ' - Tanjiro Kamado
4. Zenitsu Agatsuma Quotes
'Izaho dia… niaro azy… satria ianao… nilaza fa… ity zavatra ity dia manan-danja kokoa aminao… noho ny fiainanao manokana.' - Zenitsu Agatsuma
“Ka zazavavy kely mahafatifaty no entinao miaraka aminao… Mitondra zazavavy mahafatifaty toy izany ianao isan'andro ... ary mandeha amin'ny dianao am-pifaliana toy izany… Avereno amiko ny rà nalatsaka ho anao!” - Zenitsu Agatsuma
'Aza kivy mihitsy. Na dia maharary aza, na dia maharary aza, dia aza manandrana mamoaka ny lalana mivoaka mora. ' - Zenitsu Agatsuma
“Mazava ho azy fa namely ahy be loatra i Gramps. Tsy nandao ahy mihitsy anefa izy. ” - Zenitsu Agatsuma
inona ny anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
'Raha mahafehy ny iray ianao, izany no antony hankalazana.' - Zenitsu Agatsuma
'Nandresy tamin'ny ady aho saingy resy tamin'ny ady!' - Zenitsu Agatsuma
5. Fanononana Kokushibo
“Misaora amin'ny ra… Tsy mahazo mandatsaka na dia rano iray monja aza ianao… satria raha manao izany ianao… dia hisaraka mampalahelo ny vatanao sy ny lohanao.” - Kokushibo
“Nanokatra lalana ianao… hahatratra haavo avo kokoa… ary nafoinao io… Malemy be.” - Kokushibo
“Izaho… tsy manan-javatra… holazaina… Ubuyashiki… tamim-pahalalana… no niafina… ny tenany.” - Kokushibo
6. Nezuko Kamado Quotes
'Nezuko dia olombelona hatramin'ny nahaterahany.' - Nezuko Kamado
“Tsara raha sendra lehilahy toa Hisha aho.” - Nezuko Kamado
7. Shinobu Kocho Quotes
'Mety ho izaho irery no vehivavy-sabatra eo amin'ireo andry tsy afaka manapaka ny lohan'ny demonia. Fa na iza na iza mamorona poizina mahafaty demonia dia mety hahagaga. ” - Shinobu Kocho
8. Teny notsongaina Muzan Kibutsuji
'Izaho dia zavaboary lavorary izay akaiky tsy manam-petra.' - Muzan Kibutsuji
sary slice of life tsara indrindra 2018
“Manana zavatra tadiavinao amiko ve ianao? Raiki-tahotra ianao izao. ' - Muzan Kibutsuji
“Eto amin'ity izao tontolo izao ity dia iray ihany ny demonia izay manana rà mandriaka ao amin'ny lalan-drà ao aminy izay manan-kery hamadika ny olombelona ho demonia.” - Muzan Kibutsuji
'Ara-dalàna raha mandresy ny olombelona ny demonia.' - Muzan Kibutsuji
“Mahatsiravina anao ve ny voloko? Mazava aminao ve ny tavako? Malemy toa anao ve aho? Toa tsy dia ela velona aho? Toa efa akaiky ho faty ve aho? ' - Muzan Kibutsuji
'Tiako ianao manala ny lohan'io mpihaza demonia io kavina amin'ny hanafuda.' - Muzan Kibutsuji
“Misy demonia izay tsy afaka nifehy ahy, toa an'i Tamayo ihany. Tadiavo izy ary tapaho izy. Ianao irery no azoko anontaniana. ” - Muzan Kibutsuji
9. Fanononana Sakonji Urokodaki
“Vaky mora foana ny sabatra.” - Sakonji Urokodaki
10. Jigoro Kuwajima Quote
“Raha zavatra iray monja no azonao atao dia zary tonga lafatra. Ampitao hatrany amin'ny faran'ny farany izy. ” - Jigoro Kuwajima
Loharano misy sary: Demon Slayer Wallpaper
100+ amin'ireo teny nalaina Owari No Seraph tsara indrindra
Teny fampiasa Bakuman matanjaka indrindra manome anao fanerena fanampiny
Anime 10 tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra